ချစ်သူနဲ့စကားများပြီးတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ ? | Buzzy
ချစ်သူနဲ့စကားများပြီးတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ ?
သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့် စုံတွဲတွေမကြာခဏစကားများကြရပါတယ်။စကားမများအောင်နေလို့ရမယ့် နည်းလမ်းရောမရှိဘူးလား ? မရှိလောက်ပါဘူး။စုံတွဲတိုင်းရန်ဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမယ့် ရန်ဖြစ်ပြီးရင်ပြန်အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ နည်းလမ်း ၆ခုကို Bright Side မှတစ်ဆင့်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
သဘောထားကှဲလှဲမှုတှကွေောငျ့ စုံတှဲတှမေကွာခဏစကားမြားကွရပါတယျ။စကားမမြားအောငျနလေို့ရမယျ့ နညျးလမျးရောမရှိဘူးလား ? မရှိလောကျပါဘူး။စုံတှဲတိုငျးရနျဖွဈကွတယျ။ဒါပမေယျ့ ရနျဖွဈပွီးရငျပွနျအဆငျပွအေောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာ နညျးလမျး ၆ခုကို Bright Side မှတဈဆငျ့ဖျောပွပေးသှားပါမယျ။
ဟုတ်ပါ့မလား ? အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား ? ကိုယ်မကြိုက်တာ...သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာမျိုးကို တွေ့ပြီဆို အသက်ဝဝရှုပြီး ၁ဝထိရေတွက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုက်မာန်ပါ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို သင်မနာကျင်စေချင်ဘူးလေ ဟုတ်?
ဟုတျပါ့မလား ? အလုပျဖွဈပါ့မလား ? ကိုယျမကွိုကျတာ...သဘောထားမတိုကျဆိုငျတာမြိုးကို တှပွေီ့ဆို အသကျဝဝရှုပွီး ၁ဝထိရတှေကျပါ။ကိုယျ့ရဲ့စိတျလိုကျမာနျပါ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကို သငျမနာကငျြစခေငျြဘူးလေ ဟုတျ?
၂. ''Stop'' ဆိုတဲ့စကားကို လက်တွေ့ကျင့်သုံး
အကြီးအကျယ်စကားများတဲ့အခါ အရေးကြီးဆုံးက သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးအပြိုင်ဆိုင်ပြောနေတဲ့ စကားတွေကို ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး သေချာပြန်စဉ်းစားပါ။မရဘူး...ခေါင်းပူနေပြီ။ စိတ်တစ်အားရှုပ်လာပြီဆို တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာသွားပြီး အေးဆေးပြန်သုံးသပ်။ပြီးမှ ထပ်ဆွေးနွေးပေါ့..ဒီအခါသွေးအေးသွားပြီဆိုတော့ စကားပြောမလောတော့ဘူး။အေးဆေးရှိလာမယ်။သင့်ရဲ့ စိတ်ရှည်မှုကိုလည်း သူသတိထားမိသွားပါလိမ့်မယ်။
အကွီးအကယျြစကားမြားတဲ့အခါ အရေးကွီးဆုံးက သငျတို့နှဈယောကျလုံးအပွိုငျဆိုငျပွောနတေဲ့ စကားတှကေို ရပျပဈလိုကျဖို့ပါပဲ။ရပျပဈလိုကျပွီး သခြောပွနျစဉျးစားပါ။မရဘူး...ခေါငျးပူနပွေီ။ စိတျတဈအားရှုပျလာပွီဆို တိတျဆိတျတဲ့နရောသှားပွီး အေးဆေးပွနျသုံးသပျ။ပွီးမှ ထပျဆှေးနှေးပေါ့..ဒီအခါသှေးအေးသှားပွီဆိုတော့ စကားပွောမလောတော့ဘူး။အေးဆေးရှိလာမယျ။သငျ့ရဲ့ စိတျရှညျမှုကိုလညျး သူသတိထားမိသှားပါလိမျ့မယျ။
သင်တကယ်လိုချင်တာ ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ..ဟုတ်တယ်မလား။ အမြဲတမ်း သင့်ဘက်ကမှန်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ချစ်တဲ့သူနဲ့စကားများတဲ့အခါ မှန်တယ်၊မှားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာ သေချာခွဲခြားလို့မရဘူး။ စကားများနေရင်း သင့်အရမ်းဒေါသထွက်နေတယ်ဆို ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလွဲချော်သွားနိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ.. တစ်ခုခုလွဲနေတာကို သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
သငျတကယျလိုခငျြတာ ဒါမြိုးမဟုတျဘူးလေ..ဟုတျတယျမလား။ အမွဲတမျး သငျ့ဘကျကမှနျနဖေို့မလိုပါဘူး။ ခဈြတဲ့သူနဲ့စကားမြားတဲ့အခါ မှနျတယျ၊မှားတယျဆိုတဲ့ကိစ်စတှဟော သခြောခှဲခွားလို့မရဘူး။ စကားမြားနရေငျး သငျ့အရမျးဒေါသထှကျနတေယျဆို ပွောခငျြတဲ့အကွောငျးအရာတှလှေဲခြျောသှားနိုငျပါတယျ။ စဉျးစားကွညျ့ပါ.. တဈခုခုလှဲနတောကို သငျသတိထားမိပါလိမျ့မယျ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က အမြင်ချင်းမတူတော့ ကိုယ်ကဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပေမယ့် သူ့အတွေးမှာ ကြီးကျယ်ချင် ကြီးကျယ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေက စကားများရတာနဲ့တောင်မတန်ပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲက အားကုန်ပြီး စိတ်ဖိစီးတာပဲအဖတ်တင်တယ်။ အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကို မေ့လိုက်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျက အမွငျခငျြးမတူတော့ ကိုယျကဘာမဟုတျတဲ့ကိစ်စလို့ထငျပမေယျ့ သူ့အတှေးမှာ ကွီးကယျြခငျြ ကွီးကယျြနလေိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့အသေးအမှားကိစ်စလေးတှကေ စကားမြားရတာနဲ့တောငျမတနျပါဘူး။နောကျဆကျတှဲက အားကုနျပွီး စိတျဖိစီးတာပဲအဖတျတငျတယျ။ အကြိုးမရှိတဲ့အရာတှကေို မလေို့ကျခွငျးဟာ ကိုယျ့ကိုကိုယျစိတျခမျြးသာအောငျထားနညျးတဈမြိုးပါပဲ။
သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ နားလည်နိုင်တော့တဲ့အခါ နောက်ဆုံးတစ်ခု သင်လုပ်နိုင်တာက သူ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းဆက်သွယ်နေဖို့ပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုနည်းလမ်းက သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်ကိုပျော့ပျောင်းသွားစေပါတယ်။ပွေ့ဖက်ဖို့အတွက် မကြောက်ရွံပါနဲ့။ဖက်ကြည့်လိုက်ပါ။အများကြီး အထာက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
သဘောထားခွငျးမတိုကျဆိုငျတဲ့အခါ နားလညျနိုငျတော့တဲ့အခါ နောကျဆုံးတဈခု သငျလုပျနိုငျတာက သူ့နဲ့ခန်ဓာကိုယျခငျြးဆကျသှယျနဖေို့ပါ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဒီလိုနညျးလမျးက သငျတို့နှဈယောကျလုံးကို စိတျကိုပြော့ပြောငျးသှားစပေါတယျ။ပှဖေ့ကျဖို့အတှကျ မကွောကျရှံပါနဲ့။ဖကျကွညျ့လိုကျပါ။အမြားကွီး အထာကျအကူဖွဈပါတယျ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သူဖြတ်သန်းနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးမြင်သမားတွေရဲ့ဝါဒီတွေဟာ သင်တို့ကို စကားများအောင်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ကြားလူတွေရဲ့သွေးထိုးစကားကို မယုံကြည်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။
သငျ့ပတျဝနျးကငျြနဲ့ သူဖွတျသနျးနရေတဲ့ပတျဝနျးကငျြဟာ သငျတို့နှဈယောကျရဲ့ ဆကျဆံရေးအပျေါလှမျးမိုးမှုတှရှေိနိုငျပါတယျ။ အဆိုးမွငျသမားတှရေဲ့ဝါဒီတှဟော သငျတို့ကို စကားမြားအောငျဖနျတီးပါလိမျ့မယျ။ကွားလူတှရေဲ့သှေးထိုးစကားကို မယုံကွညျဘဲ ကိုယျတိုငျဆငျခွငျဉာဏျနဲ့ စဉျးစားဆုံးဖွတျပါ။